नोभेम्बर 13, 2016 नोभेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक5Comments मलामी, महिला
महिलालाई मलामी नलानुको कारणहरु ! हिन्दु धर्मको परम्परा अनुसार, मृत शरीरलाई जलाउने बेला महिलाहरूलाई मलामी लानुहुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर, किन तपाइलाई थाहा छ ? हामी तपाईँहरूलाई प्राचीनकालमा महिलाहरूलाई किन मलामी लगिदैन थियो भनेर केहि कारणहरूको जानकारी दिन खोज्दैछौ ।
महिलाहरूले विशेष गरी घरघरायसी काम गर्ने र पुरुषहरूले घरबाहिरको काम सम्हाल्ने अधिकांस घर परिवारमा चल्दै आएको प्रथा हो। यो प्राचिन समय देखि नै यसैगरि चल्दै आएको छ। समय बित्दै जाँदा यो नै परम्परा अनि संस्कृति बन्यो। घरायसी काम महिलाले र परिश्रम पनि बढी पर्ने अनि घर बाहिरका काम पुरुषले गर्ने चलन बन्यो।
यसरी नै मलामी जाने पनि पुरुष मात्रको कामको रुपमा चिनिदैँ, गरिदै आयो। महिला मलाली जानु हुन्न वा पुरुष मात्र मलामी जानुपर्ने कहि कतै शास्त्रमा स्पष्ट उल्लेख भेटिँदैन। बिना कारण केवल प्रथा चल्दै आएकाले नै महिला मलामी जान हुन्न भन्ने विश्वास गरिन्छ। प्राचीन कालमा भने महिलालाई मलामी नलानुका कारणहरू यस्ता थिए।
प्राचीन दिनहरूमा, पुरुषहरूले लासलाई घाटमा लगेर जलाउँदै गर्दा महिलाले घरको काम धन्ना भ्याउनुपर्ने हुन्थ्यो। साथै, घाटमा गएर फर्केका मलामीहरू घर फर्किएपछि आगोको धूपले चोख्ख्याउनुपर्ने हुन्थ्यो र त्यसैलाई तयार पार्नको लागि महिलाहरू घरमै बस्ने गर्दथे।
हिन्दु धर्मअनुसार, कुनै पनि मानिसको अन्तिम संस्कार गर्दा शरीरलाई पुरै रूपमा जलाउनुपर्दछ। कसैको शरीर त केहि घण्टामै जल्दछ भने कसैको निकै समय पनि लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा घरमा बालबच्चा अनि गाईवस्तुको हेरचाह गर्नुपर्ने हुनाले पनि त्यतिबेला महिलाहरूलाई घरमै राख्ने गर्दथे।
आजको बैज्ञानीक युगमा यस्ता सोचहरुमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । हामी(साईन्स इन्फोटेक समुह)पहिला यस्ता सोचहरुको अध्ययन गर्छौ र त्यसमा लुकेको बैज्ञानीक पक्षको शुक्ष्म बिश्लेषण गरी समाज रुपान्तरणको दिशामा सधै प्रयत्नरत हुनेछौ ।
रुढीबुढीले भनेका र हामीले सुन्दै आएका केहि यस्ता सस्कारहरुमा तिनीहरुमा रहेको व्यवहारिक पक्ष हेर्दा बैज्ञानीक कारण केही केहिमा त पाईएको छ । फेरी आजको बैज्ञानीक युग भन्दै हरेक कुरामा बैज्ञानीक कारण खोज्दै बढी भौतिकवादी हुनु पनि सान्दर्भिक नहोला । समय र परिस्थती अनुसार हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।
तर जे कारणहरु भएपनि आज नेपालमा महिला र पुरुष अधिकार र क्षमतामा समान हुने क्रममा हुनुका साथै महिलाहरु धेरै सवल र सक्षम पनि भई सकेका छन । यो त हिजोको हाम्रो सोच थियो । नेपालमा महिलाहरु राष्ट्रपति, प्रधानन्यायधिष तथा सभामुख भईसकेका छन ।
← रावणले देखेका स्त्रीका आठ अवगुणहरु
रोमान्टिक प्रेमी र प्रेमिकाहरुको लागि केही उपयोगी टिप्सहरु →
5 thoughts on “महिलालाई मलामी नलानुको कारणहरु”
Pingback: जान्नुहोस् ! शास्त्र अनुसार महिलाले बिर्सेर पनि गर्नुहुदैन यी कामहरु
Pingback: चाणक्य नीतिका अनुसार पुरुषले सधैं गोप्य राख्नुपर्ने ४ कुराहरु
Pingback: हेर्नुहोस् गोप्यता सम्वन्धी महान व्यक्तिका प्रेरक भनाईहरु
Pingback: कहाँ छ महिला अधिकार ?